NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် GatesAir နှင့် Foccus ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘရာဇီးတီဗီမှတ်တမ်းများအတွက် ISDB-TB transmitter Upgrade
Home » သတင်း » GatesAir နှင့် Foccus ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘရာဇီးတီဗီမှတ်တမ်းများအတွက် ISDB-TB transmitter Upgrade
Foccus ဒစ်ဂျစ်တယ်နောက်ထပ်အောက်ပိုင်းပါဝါ site ကိုအဆင့်မြှင့်မည်ဟုမျှော်လင့်အတူအဓိကမြို့ကြီးများအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ထိရောက်မှုတိုးတက်စေရန်ကိုး GatesAir ULXTE အရည်-အအေးက transmitter တပ်ဆင်ရန်နှင့်ကော်မရှင်ပါလိမ့်မယ်
Cincinnati, ဧပြီ 17, 2019 - GatesAir, ကြိုးမဲ့အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်, Over-the-air တီဗီနှင့်ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အကြောင်းအရာပေးပို့ဖြေရှင်းနည်းများ, Foccus ဒစ်ဂျစ်တယ်, GatesAir ရဲ့ In-တိုင်းပြည်မိတ်ဖက်နှင့်အတူဘရာဇီး၌အခြားသောကြီးမား ISDB-TB ဒီဂျစ်တယ်တီဗီသဘောတူညီချက်ပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။ Foccus ဒစ်ဂျစ်တယ် Belo အလျားလိုက်, Porto Alegre, Rio de Janeiro မြို့နှင့်ဆောပိုလိုအပါအဝင်သော့ချက်ထုတ်လွှင့်စျေးကွက်, တီဗီမှတ်တမ်းများအတွက်ဘရာဇီးရဲ့အကြီးဆုံးထုတ်လွှင့်ကွန်ရက်များထဲကတစ်ခုကိုး GatesAir ULXTE အရည်-အအေးက transmitter ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ကော်မရှင်ပါလိမ့်မယ်။ Delivery မေလ 1 အားဖြင့်လေထုပေါ်မှာရှိသမျှကိုးက transmitter အတူဧပြီလလယ်အတွင်းစတင်ပါလိမ့်မယ်။
ကဲသာဘုရင် Donato, Foccus ဒစ်ဂျစ်တယ်၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အညီ, ယနေ့အသုံးပြုမှုအတွက်အခြားရောင်းချသူထံမှက transmitter နှင့်အတူချို့တဲ့ဖြစ်ကြောင်းလက္ခဏာများ - တီဗီမှတ်တမ်းယင်း၏ ISDB-TB ကွန်ယက်ကိုဖြတ်ပြီးလုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိရောက်စွာနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာဖို့ရှာကြံလျက်နေ၏။ သူ GatesAir ရဲ့သတိထားဒီဇိုင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်ဂျင်နီယာတဦးတည်း attribute ကိုအခြားအဘို့ယဇ်ပူဇော်ကြ၏မဟုတ်ကြောင်းသေချာကြောင်းထပ်ပြောသည်။
"အများစုက transmitter ကိုရောင်းချသူစွမ်းဆောင်ရည်ယဇ်ပူဇော်သောသူအကျိုးရှိစွာက transmitter ကိုတည်သော်လည်း GatesAir စျေးကွက်မှထိရောက်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်စစ်မှန်သော convergence ဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ" ဟု၎င်းကပြောသည်။ "တီဗီမှတ်တမ်း 13 ရာခိုင်နှုန်းအလွန်နိမ့်ထိရောက်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူအခြားရောင်းချသူထံမှက transmitter ကို အသုံးပြု. ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ULXTE transmitter ကိုလျှပ်စစ်မီးအတွက်တီဗီမှတ်တမ်းမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ငွေစုဆောင် ခဲ့. , ခြွင်းချက်မဲ (မော်ဂျူအမှားအချိုး) စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပိုပြီးအားကောင်းတဲ့အချက်ပြမှုများကိုမည်သည့်ထိရောက်မှုအတွက် 300 ရာခိုင်နှုန်းခန့်တိုးတက်လာသည်ကယ်တင်တတ်၏။ အဘယ်သူမျှမနှိုင်းယှဉ်တကယ်ရှိပါတယ်။ "
အရည်-အအေးက transmitter များ၏ရွေးချယ်မှုအပိုဆောင်းကုန်ကျစားရိတ်များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အကျိုးကျေးဇူးများကိုဆောင်ခဲ့ဦးမည်။3kW ထံမှ 11 kW အထိအဆိုပါအလတ်စားနှင့်မြင့်မားသောပါဝါက transmitter, သိသိသာသာဘရာဇီးရဲ့အမြင့်မားသောအပူချိန်ရာသီဥတုအေးဝန်နှင့်လေအေးပေးစက်ဥပဒေကြမ်းများကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်။ GatesAir ထိထိရောက်ရောက်ယင်းက transmitter အတွင်းအရည်ဖြန့်ဝေလျက်, အဆောက်အဦအပြင်ပန်းမှအပူဖယ်ရှားရန် ULXTE ဗိသုကာနှင့်အတူတစ်စုပ်စက် system ကိုပေါင်းစပ်။
Donato အဆိုအရ, installation နဲ့ကော်မရှင်အလျင်အမြန်အဆိုပါ ULXTE ရဲ့ modular ဒီဇိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရွှေ့မည်။ ဤသည် Foccus ဒစ်ဂျစ်တယ်အင်ဂျင်နီယာများလျင်မြန်စွာ GatesAir ရဲ့ PowerSmart Plus အားဗိသုကာသိသိသာသာကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ခြေရာကိုလျော့ချလိမ့်မည်ဟုဖြည့်စွက်, site ပေါ်တွင်က transmitter တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်နိုင်သည်သေချာပါလိမ့်မယ်။
"ဒီအာကာသလေးခြောက်လမှထိန်သိမ်းတက်ယူရာ installed လက်ရှိမော်ဒယ်, နှိုင်းယှဉ်အလွန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းက transmitter နေကြတယ်" ဟုသူကပြောသည်။ ထို့အပြင် 40dB သူတို့ရဲ့မဲလိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံစဉ် "ဒီ ULXTE တစ်ခုတည်းကိုယ်ထည်ထဲမှာပါဝါ၏တူညီသောငွေပမာဏကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ ဤအရာသည်အလွန်အာကာသ-အကျိုးရှိစွာအထုပ်ထဲမှာအတော်လေးကောင်းသော Over-the-air signal ကိုလွှမ်းခြုံဖို့နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ "
Foccus ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် GatesAir လည်း Foccus ဒစ်ဂျစ်တယ် transmitter ကိုစစ်ဆင်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပေါ် In-depth ကိုပညာရေးထောက်ပံ့အတူတီဗီမှတ်တမ်းအင်ဂျင်နီယာများများအတွက်လေ့ကျင့်ရေးအစပျိုးအပေါ်အတူတကွအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ GatesAir ရဲ့ PowerSmart Plus အားဗိသုကာသို့သော်ပူ-swappable module တွေနှင့်အာဏာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်အတူ်, မြင့်မားမလိုအပ်တဲ့ဗိသုကာကျေးဇူးတင်သည်ဤအင်ဂျင်နီယာများအဘို့အပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များကို minimize ပါလိမ့်မယ်။ Foccus ဒစ်ဂျစ်တယ်လည်းကွန်ယက်ကိုဖြတ်ပြီး shared ခံရထောက်ပံ့နှင့်လိုအပ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက်နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးမယ့်ဘုံအပိုပစ္စည်းနှင့်အတူကူညီပါလိမ့်မယ်။
"GatesAir နှင့် Foccus ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြီးထွားဖို့ဆက်လက်သောတိုင်းပြည်အနှံ့အလွန်အားကောင်းတဲ့တီဗီ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်မိတ်ဖက်များနှင့် FM ရေဒီယိုတပ်ဆင်ဖွံ့ဖြိုးပြီးကြပါပြီ," Rich Redmond, နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ, GatesAir ကဆိုသည်။ ထို့အပြင်ဖောက်သည်များခြွင်းချက်ထိရောက်မှုမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအနိမ့်စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်၏အကျိုးကျေးဇူးများအသီးအနှံကိုရိတ်ရသေချာစဉ် "GatesAir ထူးခြားကြီးမား ISDB-TB ကွန်ရက်များတောင်းဆိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများကိုထောကျပံ့ဖို့တပ်ဆင်ထားသည်။ တီဗီမှတ်တမ်းသူတို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုအဘို့အကျော်ကြား, ငါတို့သည်ကျယ်ပြန့်, အပြိုင်အဆိုင်အကဲဖြတ်အောက်ပါ၎င်းတို့၏ရေရှည်ဒီဂျစ်တယ်တီဗီမိတ်ဖက်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ကျနော်တို့အဆင့်မြှင့်ဆက်လက် Foccus ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်တီဗီမှတ်တမ်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နှင့်၎င်းတို့၏ကျယ်ပြန့် ISDB-TB ကွန်ယက်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-04-17
ယခင်: Newport Beach ရုပ်ရှင်ပွဲတော် 2019 ပွဲတော် Trailer အတူအကြံပြုချက်များ၏တန်ခိုးလက်ခံ
နောက်တစ်ခု: Bittree အကွိမျမြားစှာဆုချီးမြှင့် Dante-Enabled ပေး Audio Patchbay များအတွက်ဆွတ်ခူးပွဲပြုလုပ်